चर्चित नायिका पूजा शर्मा र आँचलबिच बोलचाल नै बन्द भयो – Gazabkonews
चर्चित नायिका पूजा शर्मा र आँचलबिच बोलचाल नै बन्द भयो
चर्चित नायिका पूजा शर्मा र आँचलबिच बोलचाल नै बन्द भयो, आँचलले पूजा घ मण्डी भएको र आँफुलाई सँधै हे प्ने गरेका कारण आँफुहरुको बोलचाल नभएको भनिन्, पूजाले आँचलका पति डाक्टर उदिपलाई यस्तो गम्भिर आरोप लगाएपछि आँचलको चित्त दुखेको छ भन्दै खोलीन् पूजा कसैसँग पनि मिल्न नसक्नुको खास कारण, भनिन् सुष्मासँग पनि पूजाको प रिरहन्छ, प्रदिप खड्का, आकाश श्रेष्ठसँग पनि पूजा नमिलेको भन्दै झो क्कि इन् आँचल, हेर्नुहोस् भिडियो
चर्चित गायक राजेश पायल राईले भ्वाइसकी यि सुन्दरी प्रतिस्पर्धीलाई म अविबाहित नै छु, मलाई माया गरे, मेरा जिन्दगीलाई उज्यालो बनाइदिए हुन्थ्यो भनेपछि सबै हाँसे र ति सुन्दरीले पनि दिइन् राजेशलाई मुस्कान , प्रमोद, राजु र तृष्णा हेरेको हेरेको हेर्यै भए, के साँच्चिकै अविबाहित राजेश यि नेवार सुन्दरीसँग प्रेममा छन् ? खोले सारा रहस्यको राज, हेर्नुहोस् भिडियो
सातामा नेप्से स्थिर, कुन उपसमूहको परिसूचक कति बढ्यो, कति घट्यो? यस साता नेप्से परिसूचक स्थिर रहेको छ। गत साताको अन्तिम कारोबार दिन २८४३ विन्दुमा बन्द भएको नेप्से, यस साताको अन्तिम कारोबार दिन पनि सोही विन्दुमा बन्द भएको छ। यस साता नेप्से परिसूचक ३ कारोबार दिन उकालो लागेको थियो भने दुई कारोबार दिन कारोबार दिन ओरालो लागेको थियो।
५ दिनको उतारचढावपछि नेप्से गत साताको अन्तिम कारोबार दिनकै विन्दुमा पुगेर बन्द भएको हो। यस साता सेन्सेटिभ इण्डेक्स ०.५८ प्रतिशत बढेको छ। गत साताको अन्तिम कारोबार दिन ५२५.६४ विन्दुमा बन्द भएको सेन्सेटिभ इण्डेक्स ३.०७ अंक बढेर ५२८.७१ विन्दुमा पुगेको छ।
त्यसैगरी, यस साता फ्लोट इण्डेक्स ०.३५ अंक बढेर १९६.७९ विन्दुमा पुगेको छ भने सेन्सेटिभ इण्डेक्स १.२४ बढेर १७३.१२ विन्दुमा पुगेको छ। नेप्से परिसूचक यस साता कारोबार रकममा भने कमी आएको छ। गत साता ४९ अर्ब १२ करोडको शेयर कारोबार भएको बजारमा यस साता ३ लाख ७७ हजार
पटकको कारोबारमा ३४ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको १० करोड ३ लाख कित्ता शेयर खरिदबिक्री भएको छ। यस साता बजार पूँजीकरण पनि स्थिर रहेको छ। गत साताको ३९ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ रहेको नेप्सेको कुल बजार पूँजीकरण यस साता पनि ३९ खर्ब ४९ अर्ब नै रहेको छ।
यूनाइटेड सिमेन्ट्स प्रालि द्वारा उत्पादित यूनाइटेड सिमेन्ट्स ब्रान्डले नेपाल गुणस्तरबाट ५३ ग्रेडको गुणस्तर प्रमाण पत्र प्राप्त गरेको छ।५३ ग्रेड भनेको नेपालमै उत्पादन हुने सिमेन्टहरु मध्य सबै भन्दा उत्कृष्ट ग्रेड हो। यो दर्जा प्राप्त गरे संगै यूनाइटेड सिमेन्ट्सले गुणस्तरमा ठुलो फड्को मारेको छ।
५३ ग्रेडको सिमेन्ट हरेक किसिमका निर्माणमा उपयुक्त ठहरिएको सिमेन्ट हो। नेपालमा मात्र नभई विदेशका ठुला ठुला संरचनाहरुमा पनि यो ग्रेडको सिमेन्टको प्रयोग हुदै आएको छ।पारिवारिक घर निर्माण सहित गगन चुम्बी महल देखि, हाइड्रो पावर ड्याम, टनेल, बिशाल पुलहरु, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु , बाटो निर्माण मा समेत यो सिमेन्ट ढुक्क संग प्रयोग गर्न सकिन्छ।
ललितपुरको लेलेमा अवस्थित आफ्नै खानीको चुन ढुंगा प्रयोग गरि, आफै क्लिन्कर उत्पादन गर्दै आएको यस उद्योगले बिगत ६ वर्ष देखि उच्च गुणस्तरको सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ। त्यसैगरी, यस साता फ्लोट इण्डेक्स ०.३५ अंक बढेर १९६.७९ विन्दुमा पुगेको छ भने सेन्सेटिभ इण्डेक्स १.२४ बढेर १७३.१२ विन्दुमा पुगेको छ। नेप्से परिसूचक यस साता कारोबार रकममा भने कमी आएको छ। गत साता ४९ अर्ब १२ करोडको शेयर कारोबार भएको बजारमा यस साता ३ लाख ७७ हजार